Josoe 8 - Ny Baiboly
Josoe toko 8
Ny nahazoana an'i Haia - Fanamafisana ny faneken'Iaveh.
1Ary hoy Iaveh tamin'i Josoe: Aza matahotra na manam-badi-po, fa ento miaraka aminao ny mpiantafika rehetra, dia mitsangàna ka miakara hamely an'i Haia. Jereo efa natolotro eo an-tànanao ny mpanjakan'i Haia, mbamin'ny vahoakany sy ny tanànany ary ny taniny. 2Koa tahaka ny nanaovanao an'i Jerikao sy ny mpanjakany no hanaovanao an'i Haia sy ny mpanjakany koa; saingy ny babo avy aminy sy ny biby ompiny kosa no alao ho anareo. Asio otrika ao ivohon'ny tanàna.
3Dia niainga Josoe sy ny mpiantafika rehetra hiakatra hamely an'i Haia. Nifidy lehilahy mahery telo alina Josoe, nalefany tamin'ny alina, 4ka izao no baiko nomeny azy: Mahìna hianareo, dia aoka hanotrika ao ivohon'ny tanàna hianareo, ka aza manalavitra ny tanàna loatra ary samia mivonona hatrany. 5Fa hanatona ny tanàna aho sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko, ka nony mivoaka mitsena anay izy ireo toy ny tamin'ny teo, dia handositra eo anoloany izahay. 6Ary hivoaka hanenjika anay izy ireo mandra-pahatarikay azy lavitra ny tanàna fa hanao hoe: Mandositra antsika toy ny teo izy. Ka dia handositra eo anoloany izahay. 7Amin'izay kosa hianareo dia hivoaka avy ao amin'ny fanaotrehanareo, ka haka ny tanàna; hatolotry ny Tompo Andriamanitrareo eo an-tànanareo izy. 8Ary rahefa azonareo izy dia doroy, ataovy araka ny tenin'ny Tompo. Indro efa nomeko didy hianareo izao. 9Dia nalefan'i Josoe izy ireo ka lasa naka toerana hiotrika tao anelanelan'i Betela sy Haia, tao andrefan'i Haia. Ary Josoe kosa nitoetra teo amin'ny vahoaka ihany tamin'iny alina iny.
10Dia nifoha maraina koa Josoe, ka nony efa nijery ny toetry ny vahoaka, dia nandroso izy mbamin'ny loholon'Israely, nitarika ny vahoaka hamely an'i Haia. 11Niakatra sy nanatona tao avokoa ny lehilahy mpiantafika rehetra teo aminy; nony tonga teo an-tandrifin'i Haia izy, dia nitoby teo avara-tanàna, ka ny lohasaha no nanelanelana azy sy Haia. 12Dia naka lehilahy sahabo ho dimy arivo Josoe, napetrany ho otrika eo anelanelan'i Betela sy Haia, teo andrefan-tanàna. 13Nony voalahatry ny vahoaka ny toby rehetra teo avara-tanàna, sy ny otrika teo andrefan-tanàna dia nandroso eo am-pamatonan-dohasaha iny alina iny ihany Josoe.
14Vao nahita izany ny mpanjakan'i Haia dia nifoha maraina koa faingana ny lehilahy tao an-tanàna ka nivoaka hitsena an'Israely. nandroso niaraka tamin'ny vahoakany rehetra ny mpanjaka nankeo amin'ny toerana nifanekena tandrifin'ny lohasaha, fa tsy nahalala hoe misy otrika hamely azy ao ivohon'ny tanàna. 15Nody resy teo anoloan'izy ireo Josoe sy Israely rehetra, ka nandositra tamin'ny làlana mankany an'efitra. 16Tamin'izay ny vahoaka rehetra tao an-tanàna, nifamory hanenjika azy ireo. Dia nanenjika an'i Josoe izy ireo, ka dia voatarika lavitra ny tanàna. 17Tsy nisy lehilahy sisa tao Haia sy tao Betela fa nivoaka nanenjika an'Israely izy rehetra. Navelany nivoha ny tanàna, ka lasa nanenjika an'Israely izy. 18Ary hoy Iaveh tamin'i Josoe: Atsory mankany Haia ny lefona eny an-tànanao, fa efa natolotro ho eo ambany fahefanao izy. Dia natondron'i Josoe ny tanàna ny lefona teny an-tànany. 19Vao nanatsotra ny tànany izy, dia niriotra faingana avy eo amin'izay nitoerany ny otrika, ka nihazakazaka niditra ny tanàna sy naka azy, ka nodorany faingana ny tanàna. 20Niherika kosa ny tompon-tanànan'i Haia ka nahita ny setroky ny tanàna nisavoana any an-danitra, ary izy ireo tsy afa-nandositra intsony, na ho aiza na ho aiza, fa ny vahoaka nandositra mankany an'efitra nifontina namely azy nanenjika. 21Ary nony hitan'i Josoe sy Israely rehetra ity tanàna efa azon'ny otrika, sy ny setroka nisavoana, dia nifototra izy ka namely ny mponina tao Haia; 22ry zareo kosa nivoaka tao an-tanàna hitsena azy ka tonga voalafatry ny Israelita ny mponina tao Haia, ny sasany avy ao an-daniny iray, ny sasany koa avy ao an-kilany iray; ka noresen'ny Israelita izy, ka tsy nasiany olona iray sisa velona na afa-nandositra. 23Nataony sambo-belona ny mpanjakan'i Haia, ka nentiny teo amin'i Josoe.
24Nony tapitra matin'Israely ny mponina rehetra tao Haia, na teny an-tsaha, na tany an'efitra nanenjehany azy, ka efa lavon'ny lelan-tsabatra daholo hatramin'ny farany indrindra, dia niverina tao an-tanàna indray Israely rehetra ka novonoiny tamin'ny lelan-tsabatra ny olona tao.
25Roa arivo sy iray alina no tontalin'ny maty tamin'izany andro izany, na lahy na vavy, samy mponina tao Haia avokoa. 26Tsy nahemotr'i Josoe ny tànany natsotrany sy ny lefona mandra-panaovany anatema ny mponina rehetra tao Haia. 27Ny biby fiompy sy ny zavatra babo tao an-tanàna ihany no nalain'ny Israelita, araka ny didin'ny Tompo, izay nandidiany an'i Josoe. 28Nodoran'i Josoe Haia ary nofongorany nataony antontan-trano rava mandrakizay, izay mbola ao mandraka androany. 29Nasainy hahantona tamin'ny hazo anankiray ny mpanjakan'i Haia, ka navelany teo mandra-paharivan'ny andro. Nony maty ny masoandro dia nasain'i Josoe nesorina teo amin'ny hazo ny fatiny, ka natsipy tao am-bavahadin'ny tanàna, sy notindriana antontam-bato lehibe izy mbola ao mandraka androany.
30Tamin'izay Josoe dia nanangana otely ho an'ny Tompo Andriamanitr'Israely tao an-tendrombohitra Hebala, 31araka ny didy nomen'i Moizy mpanompon'ny Tompo ny zanak'Israely, araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàn'i Moizy, dia otely vato tsy voavoatra, izay tsy voavely vy. Ary nanolotra sorona dorana teo amboniny ho an'ny Tompo izy ireo sy nanao sorom-pihavanana koa. 32Nosoratan'i Josoe tamin'ny vato teo koa, ny dikan'ny lalàna efa nosoratan'i Moizy teo anatrehan'ny zanak'Israely. 33Nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiaran'ny faneken'ny Tompo, Israely rehetra, ny loholony, ny manamboninahiny, ny mpitsarany, na ny vahiny na ny zanak'Israely, ny antsasany teo anilan'ny tendrombohitra Hebala, araka ny didy nomen'i Moizy mpanompon'ny Tompo fahiny, mba hitso-drano ny vahoakan'Israely. 34Rahefa izany novakin'i Josoe ny tenin'ny lalàna rehetra dia ny tso-drano sy ny fanozonana araka izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. 35Tamin'izay rehetra nandidian'i Moizy dia tsy nisy teny iray tsy novakin'i Josoe teo anatrehan'ny fiangonan'Israely rehetra, ny vehivavy sy ny zaza ary ny vahiny nitoetra teo afovoany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0455 seconds